Indlu yanamhlanje, ephangaleleyo kufutshane neWild Atlantic Way
Ibukekayo, ikhaya langoku elikufutshane neNdlela ye-Wild Atlantic ukuze uphumle kwaye uphumle nabahlobo bakho kunye nosapho. Le propathi luhambo olufutshane ukusuka kubuninzi bezinto ezinomtsalane ezinje ngeDunmoran Beach, iinkuni zeManyano, ukuhamba kweNtaba yeColaaney kunye nomkhondo webhayisekile kunye neNqaba yaseMarkree. IStrandhill, ikhaya leehambo ezintle, izikolo ze-surf, iibhafu zeVOYA kunye noluhlu lwee-pubs kunye neeresityu, kungaphantsi kwemizuzu elishumi ukusuka emnyango ukuya elunxwemeni. Kufuphi namabala egalufa abandakanya iStrandhill, iRosses Point kunye neCastle Dargan.
Indawo ngokwayo likhaya elisandula ukulungiswa elinamagumbi okulala ama-3 kunye namagumbi okuhlambela amabini, abekwe ekupheleni kwendawo ekhuselekileyo yosapho, enesandi esiphumlayo sengxangxasi ekufuphi.
Ikhitshi kunye negumbi lokuhlala lixhotyiswe ngokupheleleyo, liyenza ilungele ukupheka isaqhwithi okanye uku-odola ukusuka kwenye yeendawo zokutyela ezithandekayo eSligo Town okanye eStrandhill.
Ifakwe kwindawo yosapho kwilali yaseCollooney.
Kukuzihlola, ngoko ke andizukubakho ukuze ndidibane nawe. Nangona kunjalo ndiya kubonelela ngazo zonke iinkcukacha ezifunekayo ngosuku olungaphambi kokuhlala kwakho kwaye unganditsalela umnxeba ukuba unayo nayiphi na imibuzo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Collooney